Keating oo hambalyo u diray guddoomiye Maxamed Mursal. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Keating oo hambalyo u diray guddoomiye Maxamed Mursal.
Keating oo hambalyo u diray guddoomiye Maxamed Mursal.
Muqdisho(SNTV) -War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska danjiraah QM u qaabilsan Soomaaliya Micheal Keating ayaa loogu halbalyeeyey guddoomiyaha cusub ee Golaha Shacabka Mudane Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan oo shalay ay doorteen xildhibaanada Golaha Shacabka.
Ergayga QM Keating ayaa wuxuu amaan iyo bogaadin u soo jeediyay mudanayaasha Golaha Shacabka sida hanaanka wanaagsan leh oo ay u doorteen guddoomiyaha cusub,isagoo u rajeeyey in uu ku guuleysto howshiisa.
Warka qoraalka ah ayaa sidoo kale waxaa loogu mahadceliyaay Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka,wuxuuna xusay in mudadii uu hoggaaminayay baarlamaanadii 9-aad iyo kan tobnaad uu qabtay howlo aad u muhimsan,iyo dowrkii uu qaatay.
Mudane Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa loo doortay guddoomiyaha Golaha Shacabka maalintii shalay,isagoo ka guleystay ilaa 10 musharax kale oo xilkaasi u taagnayd.
Previous articleR/wasaare ku xigeenka dalka oo Xildhibaanada ku Bogaadiyay hanaanka ay u doorteen Guddoomiyaha cusub.
Next articleCiyaartooyda 17-jirada Qaranka Soomaaliya oo maantay soo gaaray muqdisho.